FBC - Namoonni tamboo si’a tokko yaalan baay’een isaanii guyya guyyaatti warraa xuuxan ta’u: qorannoo
Namoonni tamboo si’a tokko yaalan baay’een isaanii guyya guyyaatti warraa xuuxan ta’u: qorannoo
Finfinnee, Amajjii 2, 2010 (FBC) Namoonni tamboo yaalan harka sadii keessaa lama gara guyya guyyaatti warra xuuxaniitti akka jijjiiraman qorannoon ibse.
Ragaan Yunaayiutid Kiingidam, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Niw Zilaandii sassaabame akka mul’isutti namoonni dhibbantaa 60.3 xuuxuu yaalanii dhibbantaan 68.9 guyya guyyaan xuuxuu amaleeffatanii itti-fufaniiru.
Qorattoonni kunniin akka jedhanitti qorannuchi tamboo xuuxuu itti-fufuun muuxannoo al takkaa irraa cimee itti-fufuu danda’a.
Akka isaan jedhanitti qorannuchi barbaachisummaa tamboo yaaliidhaaf xuuxuu irraa of-qusachuu mirkaneesseera.
Qorannoon ‘Nicotine & Tobacco Research Journal’ irratti ba’e kun rabsaa gaaffiiwwanii si’a saddeetii bara A.L.A 2000 fi 2016 gidduuttiin deebii namoota 215,000 irratti hundaa’ee geggeffame, Odeeffannoo Fayyaa Biyyoolessaa bu’uureffatee.
Dursaan qorannichaa Proofeesar Peter Hajek Yuunivarsitii Kuwiin Meerii Landan irraa akka jedhanitti ragaan hariiroo tamboo tokko yaaluu gidduu fi guyya guyyaan amaleeffatanii xuuxuu itti fufuu gidduu jiru hammana bal’aa wayita sassaabamu kun jalqaba.
“Carraan namni guyyaa jalqabaa tamboo xuuxe guyya guuyyaatti kan xuuxutti jijjiiramuu guddaa akka ta’e bira geenyeerra, kun ammoo barbaachisummaa yaalii tamboo jalqabaa xuuxuu dhorkuu numirkaneessa “ jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Dhiibbaa dhiigaa ittisuuf	Hirqinfannaan maalin namatti dhufa? »